I-Google Yakha kanjani i-Web Scrapers yayo? - Impendulo ye-Semalt
Ukukhishwa kweWebhu kube umsebenzi obaluleke kakhulu kuyo yonke inhlangano ngenxa yezinzuzo zayo eziningi. Nakuba cishe zonke izinkampani zizuza kulo, umzukulu obaluleke kunabo bonke ukuhlunga iwebhu yi-Google.
Amathuluzi okuhlenga iwebhu we-Google angahlukaniswa abe yizigaba ezintathu ezinkulu, futhi:
1. Abakwa-Google Crawlers
abakwa-Google baziwa nangokuthi i-Google bots. Zisetshenziselwa ukukhipha okuqukethwe kwekhasi ngalinye kuwebhu. Kunezinkulungwane zezigidi zamakhasi wewebhu kuwebhu, futhi amakhulu amakhulu athathwa njalo ngeminithi, ngakho-ke i-Google bots kufanele idonsa wonke amakhasi ewebhu ngokushesha ngangokunokwenzeka - ventilatore pepeo vourdries nero online.
Lezi bots zihamba ngezinhlelo ezithile zokunquma ukuthi amasayithi akwazi ukukhwabanisa namakhasi ewebhu ukuze athole. Ziqala ohlwini lwama-URL ayenziwe kusukela ezinkambisweni zokudlulela zangaphambilini. Ngokwezifiso zabo, lezi bots zibona izixhumanisi ekhasini ngalinye njengoba zikhahlela futhi zengeze izixhumanisi ohlwini lwamakhasi okufanele zikhawulwe. Ngenkathi zikhahlela iwebhu, ziqaphela izingosi ezintsha futhi zivuselelwe.
Ukulungisa ukungaqondi okuvamile, i-Google bots ayinakho ikhono lokubeka amawebhusayithi. Lona umsebenzi we-index ye-Google. Ama-Bots akhathazeke kuphela ngokufinyelela amakhasi wewebhu ngaphakathi komugqa wesikhathi esincane kunazo zonke. Ekupheleni kwezinqubo zabo zokukhahla, i-Google bots idlulisela konke okuqukethwe okuqoqwe kusuka kumakhasi wewebhu kuya ku-Google index.
2. Inkomba ye-Google Index
ye-Google ithola konke okuqukethwe okukhishwe kusuka ku-Google bots futhi isebenzisa ukukala amakhasi wewebhu aphethwe. Inkomba ye-Google yenza lo msebenzi ngokusekelwe ku-algorithm yayo. Njengoba kushiwo ngaphambili, inkomba ye-Google ihlanganisa amawebhusayithi futhi ithumela izinkampani ukusesha amaseva womphumela. Amawebhusayithi anezinhla eziphezulu ze-niche ethile avela kuqala kumakhasi omphumela wokusesha ngaphakathi kwaleyo niche. Kuyinto elula njengaleyo.
3. Imiphumela Yosesho lwe-Google Usesho
Uma umsebenzisi efuna amanye amagama angukhiye, amakhasi ewebhu ahambelana kakhulu akhonzwa noma abuyiselwa ngokulandelana kokubaluleka kwawo. Nakuba isikhundla sisetshenziselwa ukucacisa ukuhambisana kwewebhusayithi yokusesha amagama angukhiye, akuyona kuphela into esetshenziselwa ekunqumeni ukuhambisana. Kunezinye izici ezisetshenziselwa ukunquma ukuhambisana kwamakhasi ewebhu.
Njalo izixhumanisi ekhasini elivela kwamanye amasayithi likhuthaza isikhundla nokuhambisana kwekhasi. Noma kunjalo, zonke izixhumanisi azilingani. Izixhumanisi eziyigugu kakhulu yizo ezitholwa ngenxa yekhwalithi yokuqukethwe kwekhasi.
Ngaphambi kwamanje, inani lezikhathi igama elingukhiye livele ekhasini lewebhu elisetshenziselwa ukukhulisa izinga lekhasi. Noma kunjalo, akusekho. Okubalulekile manje ku-Google yikhwalithi yokuqukethwe. Okuqukethwe kuhloswe ukuthi kufundwe, futhi abafundi bakhonywa kuphela ngekhwalithi yokuqukethwe futhi hhayi ukubonakala kwegama elingukhiye. Ngakho, ikhasi elifanele kakhulu lombuzo ngamunye kufanele libe nezinga eliphakeme kakhulu futhi livele kuqala emiphumeleni yalowo mbuzo. Uma kungenjalo, i-Google izolahlekelwa ukwethembeka kwayo.
Ekuphetheni, iqiniso elilodwa elibalulekile lokususa kulokhu okushiwo yilokho ngaphandle kwe-web scraping, i-Google nezinye izinjini zokusesha ngeke zibuyise umphumela.